Borlange iyo SomaliTalk.com
SOMALITALK - BORLANGE
Borlänge iyo Somalitalk.com II
Bismillaahi wassalaatu wassalaamu calaa Rasuulilaahi.
Maxaa isbadalay shan sano kadib?
Maqaallo laga qoray Soomaalida
Isbaddal kuyimid khariiddada siyaasadda ee magaalada
Is’abaabulid iyo is’ururin
Yaa horjooge maanta u ah Soomaalida magaaladan?
Caruur lasoo luggooyey
Wadajir (bulshada aan lajoogno saldhiggeeda)
Dhibaatada dumarka Muslimiinta haysato.
Maqaalkan wuxuu dabasocdaa maqaal kan lamagac ahaa oo kusoo baxay somalitalk.com taariikhu markay ahayd 24 May sanadkii 2002 dii iyo waliba maqaallo kale oo dhowr ahaa oo iyana isku mawduuc kahadlayey uuna qoray wariye Cabdixakiin Axmed Guuleed. Maqaalkaa iyo maqaallada kale ee wehliyey waxay kahadlayeen xidhiidh kadhaxeeyey Somalitalk.com iyo soomaalida Borlänge waagaas, xidhiidhkaas oo uu abuuray wariye Cabdixakiin Axmed Guuleed oo markaa joogay Borlänge ugana soo gudbin jirey Somalitalk.com wararka iyo arrimo kale oo badan guud dalkan Sweden, gaar ahaanna magaaladan yar ee Borlänge loo yaqaanno. Qoraalkan ayaa ay sababta loosoo qoray tahay Bahda Somalitalk.com oo aad u xiisaynayso bal in ayaga gaar ahaan iyo guud ahaan soo booqdayaashoodaba ay helaan macluumaad kusaabsan Reer Borlänge iyo xaalkoodu wuxuu kudanbeey, Maxaa isbadalay shantii sano ee lasoo dhaafay? Maxaa hagaagay? Maxaan hagaagin? Iyo arrimo kale oo soo hoos galayaba.
Marka maxaa isbadalay shan sano kadib?
Waxyaabaha isbadalay ayaa waxaa kamida inay soomaalidii magaalada dagganayd laba jibbaarantay shan sano kadib oo ay kudhow yihiin 600 meesha ay 2002 dii ka’ahaayeen kudhawaad 300 oo qof iyadoo laqiyaasayo inay dhammaadka 2008 da gaadhi doonaan 700 oo qof ugu yaraan. Sidoo kale waxaa aad Soomaalida looga bartay magaalada iyagoo caan kanoqday marka labarbar dhigo dadka kale ee ajaanibta ah ee kula nool magaalada. Sidoo kale inay 99% soomaalida kunool yihiin kaalmada adeegga bulshada oyna ahayn dad muruqooda maala iyadoo ay ugu wacantahay sababo ay ugu horrayso shaqo yaraan sideedaba iskataagan iyo Soomaalida oo ay kuyar yihiin dadka xirfadaha leh ama shahaadooyin sarsare sita iyo dadka intiisa badan oo wakhti yar dalka joogo (baadhis ay sammaysay Jaamacadda Gothenburg dhowr sano kahor ayey kusheegeen inay tahay 12 sano qiyaastii wakhtiga uu ubaahan yahay qofka ajnabiga ah ee kayimmaado dunida sadeexaad intuu kala qabsado nolosha dalkan isagana fillaan karo) . Shantaa sano ee lagasoo gudbay majirto hal shay oo ladhihi karo horumar ayaa laga sammeeyey illaa iyo hadda. Iskadhaaf waxkale ee waxaa xidhmay madaaristii ilmaha yaryar quraanka loogu dhigi jirey, waxaa sidoo kale xidhmay meelihii ay ururrada Soomaalidu fureen ee marna lugu qaxwayn jiray marna turubka lagu ciyaari jirey.
Maqaallo laga qoray Soomaalida:
Intii muddo ah waxaa jiray qoraallo aan ufiicnayn sumcadda soomaalida oo ay jaraa’idka gobolka iyo kamagaaladaba kaqorayeen, waxayna ahayd arrin ay soomaalida laftoodu billaabeen qorsho xumo awgeed ayagoo markaa kacalaacalayey dhibaato kahaysatay xagga horumarka. Waxaa jirtay markaa inay rag soomaali ah ayagoo jaraa’idka adeegsanayo ay soo gudbiyeen duruufaha kuhaysto magaaladan ayagoo markaa farta kufiiqayey shaqo la’aan jirtay balse si gaara u saammaynaysay soomaalida ayagoo waliba kudaray in 300 ee qof ee Soomaalida ah ee magaalada kunool ay shaqo kahaystaan labo ama saddex qof oo qudha. Dalka iswiidhan qofkii sheegta inuusan shaqaysan waxaa durbababa loo qaataa inay masruufto dawladda ama magaalada uu markaa daggan yahay. Arrintaana waa arrin foolxun maxaa yeelay dadka dalkan daga noloshooda waxaa ugu muhiimsan oo kow ka’ah erayga shaqo, waxaa la’iskugartaa xirfadda iyo meesha laga shaqeeyo, sidoo kalena waa la’isku abaabulaa oo la’isku urursadaa, waa halka aan annaga qabiilka ka’isticmaallo oo kale. Qofkii markaa aan shaqayn wuxuu kadhigan yahay qof dadka kaduwan ama kaliito ama ay wax kakhaldan yihiinn.
Waxaa dhacday markaa inay dood dabo dheeraatay oo wali socoto ay billaabatay, dooddaas oo guud ahaan khusayso ajaanibta dalkan immaato gaar ahaanna soomaalida oo ayagu noqday bar jilicsan oo si dhibyar lugu duqayn karo. Waxaa markaa dooddii soomaalida kusaabsanayd cirka kusii shareerey kadib markii ay dad gaadhayo 200 qof oo soomaali ah oo sharciga dalkan lasiiyey isla sanadkaa ay soo dageen sanadkii 2006-dii Borlänge ayagoo bilaa qorshe kusoo dagay, sida la sheegay (bilaa qorsho waxaan kawadaa markuu qofku sharciga qaato dalkan waxaa iska kaashado magaalo dajintiisa Wasaaradda Midaynta bulshada oo wasaarad heer qaran ah iyo magaalooyinka iyadoo markaa magaalo walba lugula heshiiyo intii qof ee ay dajint karto dawladdana ay lacag kuus ah kusiiso, magaalada borlänge iyada sanadkii waxaa qorshe u ahaa inay dajiso isugayn 35 qof ama qoys sanadkaa oo dhan meesha ay 300 qof oy 200 boqoli soomaali tahay ay qorshe la’aan kusoo dageen iyadooy magaaladu raalli ka’ahayn)
Magaaladan oo ah magaalo yar oo dadkeedu gaadhayo 47000 oo qof, miisaaniyaddeeda sandkiina ay tahay qiyaastii 260 USD.m., dhaqaalo ahaan iyo bulsho ahaanba maxammili karto dad intaa dhan oo wakhti saa uyar kuyimmaado haddana 100% ah dad aan isibixin karin dhinac walbana kaalmo uga baahan, haddana saasooy tahay magaaladu waxba kama ayna qaban karin oo isma horistaagi karin dadka kusoo qulqulayey maadaama ayna qulquliddoodu kasoo horjeedin sharciga dalka.
“Muslimiinta waxay Iswiidhan kusoo kordhiyeen laba shay, inay carruur fara badan dhalaan iyo inay si ba’an oo naxariis darro ah u maalaan deeqaha ay dawladda ama magaalooyinka bixiyaan”
Hadalkaas murduxan waxaa ay si sir ah uga fakatay nin iswiidhish siyaasi ahaa oo iyadoo ay doorasho jirto ay qolo kamera usoo qarsadeen ayagoo kucalaacalayo una sheegay inaysan jeclayn muslimiinta kadibna siyaasigii inta ishayn waayey ayuu wixii uurkiisa kujirey afka kasii daayey. Sidaas uu sheegay ayaana laga aaminsan yahay muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaalida. Tirakoobkii ugu danbeeyey oo dhawr sano kahor lasammeeyey waxay hay’adda tirakoobka qaranka sheegtay inay Soomaalida 12% oo qudha shaqayso ooy 88% qiyaastii kunoolyihiin kaalmada bulshada iwm. Ogoowna Soomaali waxaa loo yaqaanna dalkan qofka kayimmid Jamahuuriyaddii Soomaaliya oonan wali qaadan jinsiyadda dalkan. Dadka uu tirakoobku kahadlayo waa dadka joogay dalkan qiyaastii siddeed sano ama wax kayar, siddeed sanona waaba inta uu qofkii dadaalo kala qabsan karo dalkan. Marka waxaa meesha kamaqan kummanaankii dalka laqabsaday muddada dheerna joogay.
Isbaddal kuyimid khariidadda siyaasadda ee magaalada:
Doorashadii Golaha sharci dajinta qaranka, Goloyaasha magaalooyinka iyo kuwo gobollada ee sanadkii 2006 da ayaa waxaa kadhacay isbadal aan muddo dheer kadhicin magaaladan, isbaddalkaasoo ah in Xisbigii Dimoqraadiga Hantiwadaagga ( xisbiga shaqaalaha) oo asaga waligii aqlabiyadda Golaha sharci dajinta ee magaaladan haysan jirey uu markii ugu horraysay waayo aqlabiyaddiisii waloow uu wali yahay xisbiga ugu wayn magaalada haddana waa jab kudhacay oo uusan ubaran. Taas waxaa ugasii darraa in markii ugu horraysay baarlamaanka magaaladan uu kusoo biiray oo laba kursi kacantoobsaday xisbi cunsuri ah oo midab kalasooca aaminsan oo layidhaahdo Sverige Demokraterna (SD) “iswiidhiskii dimoqraadiyiinta ahaa”. Xisbiga Hantiwadaagga Dimoqraadiga ah aqlabiyadiisa hawaayoee wuxuu aad uga naxay magaaladan oo taariikhdeeda aanan lugu arag xisbi caynkaasoo kale ah inuuba Golihii Shacbiga kuraas kacantoobsado xisbi fikaradahaas oo kale aaminsan. Arrintaa waxay dad katirsan maamulka magaalada usaariyeen qoraalladii farada badnaa ee laga qoray Soomaalida iyo Soomaalida halka mar soo dagtay qorshe la’aan magaalada oo xitaa miisaaniyaddii magaalada ligligay.
Is abaabulid iyo is ururin:
Maqaalladii laga qoray borlänge 2002 da waxay intooda badan si gaara uga hadlayeen cinwaankan aan hadda kor kuqoray, waxaan rabaa marka inaan yara sharxo halka ay arrintaa kudanbaysay.
Sida lugu yaqaanno soomaalida guud ahaan ama gaar ahaan kuwa qurbaha joogo waxaa la’iskudayaa in la’is abaabulo ururrona lassaamysto iyadoo lugu dayanayo bulshada martida loo yahay, arrintaasoo 90% mushkilad, dhibaato iyo colaad abuurto. Waxaa magaaladan kajirey dhowr urur oo ay kala sammaysteen dadyow kala dan iyo kala aragti ahaa. Arrintaas waxay soomaalida magaalada daggan usoo jiidday sumcad xumo qotodheer oo qofkii maamulka magaalada laxidhiidh is yidhaahdaba lawaydiiyaa waxay Soomaalida oo dad waxwalba wadaaga ah haddana aad utiro yar oo cusub ay intaasoo urur oo kala duwan usammaysteen halkii ay hal danahooda u dooda wada sammaysan lahaayeen?
Mar haddii lakala urur yahay lana kala aragti duwan yahay hadafka ururka loo sammaystayna uusan inta badan saafi ahayn, waxaa meeshaa imanayso in loo kala hoos maro hay’adaha dawladda oo qoloba qolada kale xagal daaci istidhaahdo. Halkaa marka dhibwaynbaa kayimid oo sababay in Soomaalida laga qaato sawir xun sidoo kale in intii yarayd ee wanaag doonka ahayd ay niyad jabaan oy faraha kala baxeen arrinta abaabulidda iyo ururinta dadka maadaama ay umuuqato fashil mooyee inaanan horumar laga sugayn.
Haddii ummad walba wax lugu imtixaano imtixaanka ugu daran ee Soomaalidu ladhutinayso aniga aragtidayda waa is abaabulid iyo is ururin la’aanta caadada unoqotay.
Ururro dhicisa oo cimri gaaban:
Ururrada laga hadlayo wax wayn ooy soomaalida iyo bulshada ay martida uyihiin ay uqaban jireen majirin oon ka’ahayn inay kidheeyaan guryo marna lugu qayilo marna wakhtiga qaaliga ah siyaabo kala duwan loogu lumiyo, sida turub iyo dubnad laciyaaro iyo kaddoodidda siyaasadaha Qabaliga kusalaysan ee fadhiidka noqday. 90% ururrada ma’ayna kasoo bixi jirin ahdaaftii lugu siiyey kaalmada ay kudhaqdhaqaaqaan taasoo loo fasiran karo inuu meesha yaallay musuqmaasuq foolxun.
Sideedaba waxaa liibaana wixii khayr kudhisan oo ay kadanbayso fikrad xalaala oo kanadiif ah, been abuur, khayaano, xigsasho iyo musuqmaasuq, marka wax iskacad ayey ahayd inayna ururro sidaa udhisan ayna meel gaadhayn waxayna dhammaan kudanbeeyeen burbur maadaama ay horaanba kutaagnaayeen cimri dayn ah.
Maanta majiro hal urur oo firfircoon oo xitaa intii hore looga bartay wax kamida fuliya halkaas ayayna Soomaalidii magaalada uga raysatay isqaqabsi iyo isxagxagasho fara badan oon dhib mooyee cidina wanaag ugu fadhin.
Yaa maanta horjooge u ah soomaalida magaaladan?
Hal qof oo mathala majiro Soomaalida maanta magaaladan inkastoo aan baahi badan loo qabin inay soomaalida cid ugasho maamulka magaalada maxaa yeelay xuquuqda qofka daggan dalkan sharcina kujooga waxaa dammaanad qaadayo sharciyada dalkan udajisan marka qofkii jecel inuu dhawrsado asagana ladhowro inta badan dhib lama kulmo. Waxaa jiray dhallinyaro dhowra oo kukala biirtay xisbiyada magaaladan kajiro inkastoo intooda badan ay kabaxeen amaba iskaba illaaween hawshaas haddana illaa iyo hadda wax firfircoon oo xubin ka’ah xisbiyada waxaa kajira hal nin oo qudha. Intaan lagaadhin in soomaalida lamathalo ayey tahay in horta laxalliyo guurguurka maanka qofka soomaliga ah oo laga yaabo inuusan hal meel oo rasmi ah ku’adkaysan yeelanna mabaadii, uu noloshiisa kusaleeyo. Hadday dhacdo in qof loo doorto inuu soomaalida mathalo oo markaa qofkii meel gaadho waxay ubadan tahay inay kukacaan dadkii doortay kolkii hore maxaa yeelay colaadda iyo heshiiskaba soomaalida waa u geedka labadiisa hoos oo meel dheer majiraan. Marka waxaan is’idhi dadkii kaqabqablayn lahaa arrintaas billaa saasay uga gaabsadeen.
Waxbarashada dadka waa wayn:
Aad ayey ugu liitaan dadka waa wayn xagga waxbarashada oo iska dhaaf cilmiya sarsare ee xitaa waxaa dadku in badan rag iyo haweenba meel saari waayeen barashada luqada iswiidhishka. Xusuusana iswiidhan waxbarashada laga billaabo dugsiyada aasaasiga ah illaa heer jaamacdeed waa kharash la’aan oo uu waliba qofku uu masruufkiisa heli saasooy tahay soomaalida heer jaamacadeed gaadha dalkan waxaa lugu qiyaasaa 5%. Arrintaa waxaa loo saariyaa qodobadan hoos kuqoran:
Dadka intooda badan oon waxbarasho aasaasi ah ama soo qaadan ama ay tayadeeda yarayd waxa as soo qaateen.
Dalkan oo ah dal aad uhoremaray marka dhinac walba laga eego taasoo sababta inay qofka kuqaadato ugu yaraan dhowr sano intuuba fahmo waxa jira iyo shakhsi ahaan waxa ufuran ee uu qabsan karo.
Dadka intooda badan oo hadafkooda koowaad ahaa inay uun halmar dalkan yimmaadaan sharcina kahelaan kadibna tooshkii tahriibka ee aduunyada oo dhan lugusoo jeexay halkaas lugu dammiyo.
Dadka qaar ay qayrkood kareebtay balwadda siiba midda soomaalida lugu salliday ee cagaaran (jaadka).
Haweenka soomaalida oo ayagu aqlabiyadooda uu hadafkooda yahay inay carruur badan dhaloodaan intayna dhaqmaadda kabixin taasoo adkaynaysa waxbarasho iwm maadaama ay carruur dhalidda iyo korintooduba tahay shaqo buuxdo oon wax kale lugu dari karin.
Dishibiliin li’i oon kawado qofka oyna noloshiisaba habaysnayn asagoon jadwal udajisan jirin oo noloshiisu ay sidii qubane un iska qulquli asagoon dibba u’eegin wax uu soo qabtay iyo waxa uusan soo qaban wax qorshe ahna aan dajisan sidii uu mustaqbalka meel ugaadhi lahaa.
Dadka oo intooda badan aad uxiiseeya musuqmaasuqa, in xoogga lamaalo ama maskaxda laga dhididiyo waxaa kasahlan wax la’isdabamariyo taasoo dayacayso caqligii sida wanaagsan looga faa’iidaysan lahaa. Dadka waxaad arki qaar khubaro kunoqday wax isdabamarinta ood isdhihi markaad aragto hadduu xagga cilmiga ujeedsan lahaa wuxuu kusoo bixi lahaa caalim bartay cilmi kamida qaybaha kala duwan ee cilmiyada.
Dad tusaale noqdo oo kuyar soomaalida magaaladan, maadaama ayna jirin dad badan oo hurumar sammeeyey oo markaa dadku kor u’eegaan kuna daydaan, booskoodiina waxaa buuxiyey mukhallaska dadka soo gura oo had iyo goor baasaboorrada foojariga ah jeebabka kusito.
Wax badan kama duwana midda dadka waawayn maxaa yeelay ilmaha waxaa tusaale u ah waalidkii iyo qaraabadiisa iyo dadka ay isu dhow yihiin ama isfahmaan haddii marka ayna ayaga unoqon tusaale uu ilmuhu kudaydo markaa ilmaha cid kale ayaa tusaale unqoto inta badanna ciddaas waa cid aan khayr badan tusin ilmaha. Carruurta in badan oo kamida waxbarasho iskadhaafee akhlaaqdoodii ayaa hallowday waxaana aad ubadan xatooyada, mukhaadaraadka iyo danbiyada kale oo ay lawadaagaan ilmaha ajaanibta ah ee dalkan daggan, meesha kuwa dalkan udhashay ay aad uga fiican yihiin kuwa ajnabiga maadaama ay haystaan fududayn badan haba ugu muhiimsanaato ayagoo waalidkood dhaqanka dalka kajiro yahay dhaqankiisii yaqaannona sida looga daabbasho sidoo kalena la’isga mooso daadadka soo fataha.
Dhibka ugu wayn ee ilmaha udiidan inay horumaraan ayaa ah waalidka dhalay oon ogaynba meesha uu joogo iyo waxa ilmihiisa sugayo waxaa loo dhaqmaa sidii soomaaliya marka lajoogo loo dhaqmi jirey oo kale.
Carruur lasoo luggooyey:
Dalkan iswiidhan wuxuu deeqsi ku’ahaa xagga isu keenidda qaraabada dalkii looga soo tagay hadda wixii kahoreeyey. Dad badan ayaa fursaddaa kafaa’iidaystay oo keenay ilmo ayna dhalin oo ay qaraabo yihiin. Qiyaastii 90% ilmahaas qaraabonimada dalkan lugu keenay waxay iskudhacaan qofkii keenay iyadoo inta badan la’isaga horyimaado xagga edbinta oo uu ilmuhu diido inuu maqlo qofkii keenay iyo xagga dhaqaalaha maadaama ilmaha loo sheego in magaciisa dhaqaale lugu qaato. Ilmaha ugu badan ee kusilca dalkan kuwaas ayaa ugu badan. Mucjisada jirtase waxay tahay inaad arki qof intuu ilmo yar ooy qaraabo yihiin soo luggooyey oo dalkan keenay oo ilmihii kuqaloocday gacantiisana kabaxay oo rafaad iyo dagaal iyo mushkilo dheer kadib kasabra ilmihii haddana saasooy tahay raadinayo kuwo hor leh oo uu sidiiyoo kale yeelo. Qaar kamida ayaan shakhsi ahaan ulahadlay anoo iskudayayo inaan kadhaahdiciyo inuusan khaladkii hore oo kale kunoqon. Waxaa lugu jiraa tartan anaa intaasoo qof soo galiyey iyo anaa intaa kabadan soo wado iwm. Loomaba jeedo ubadkan ladullaynayo, marka ilmahaas lagasoo waday waalidkii iyo asalkiisii ee meesha cidlada ah looga dhaqaaqayo waxaa loo arkaa guul lagaadhay.
Wadajir (aasaaska bulshada aan martida unnahay):
Waxaa jirto arrin ay aad u adagtahay inay fahmaan dadyawga kusoo barbaaro dunida saddexaad taasoo ah in bulshada hore’umartay isdaryeesho oo had iyo goor dadka inta udhaxeeyo 20 sano illaa 65 ay masruufaan inta kale (wixii kayar 20 oo ubada ah iyo wixii kawayn 65 oo duqow ah), qofkii jirrada, kii ilmo yar udhasho oo kukhasban inuu guriga lajoogo oo sidaa shaqadiisii uu qaban jiray uga baaqdo iyo kii ay asaga shaqo la’aani haleeshoba. Aqlabiyadda shacabka waxay ogyihiin kuna xisaabtamayaan sidii ay qaybtooda ugasoo bixi lahaayeen mas’uuliyaddaas dushooda saaran ayagoo canshuur fara badan bixinaya. Waxaa marka baryahan danbe ay dareemmeen magaalooyinka ay ajnabiga kusoo bateen siiba kuwa asalkoodu dunida saddexaad kasoo jeedo inuu abuurmay halkudhagga layidhaahdo (isudheellitir la’aan), macnaha waxaa yaraanayo dadkii wax soo saarayey ee canshuurta bixinayey waxaana kabadanayo intii larabay dadkii ubaahnaa in lakaalmeeyo taasoo saammayn wayn kuyeelato dhaqaalaha magaalooyinkaas oo iyagu 90% dhaqaalahoodu kuxidhan yahay canshuurta laga gooyo dadka mushahar qaato ee magaaladaa daggan. Durba waxaa isasoo tarayo magaalooyinka ayagoyna cunsiriyad iyo ajnabi nacayb ka’ahayn rabo inay xaddidan ajnabiga magaaladooda soo dagayo. Waxaa lagamamaarmaan ah inaynu ukuurgalo noloshooda bulshadan aan kusoo biirray ee sida gobonimada kudheehan tahay inoosoo dhawaysay oo aan u abaalgudno annagoo ugu abaalgudayno inaan kaqaybqaadanno habka ay isugu tiirsanyihiin dhaqaale ahaan asagoo qofku intuu xoogga leeyahay iskudayi inuu buuxiyo kaalinta laga sugayey oo aanu takhasus kadhigan siduu umaali lahaa nidaamka, wax xil ahna isagaba saarin qaybtiisii laga sugayey sidii asagoo socoto ah bal sida dhabta ah aan meel uu usocdaa ayan jirin.
Dhibaatada dumarka muslimaadka kuhaysto dalalkan:
Dumarka muslimaadka ah ee dalkan joogo inkastoon filayo dhammaan dalalka Yurubta Galbeed kuwa joogo in ay laqabaan waxay noloshoodu kudhisantahay qaabkii ay ugu noolaayeen dalkoodii hooyo. Waxaa kamuuqato intooda badan inaynaba qorshaha ugu jirin inay ama waxbartaan ama shaqo ukallahaan. Haddii haweenayda ay haysato nin kumasruufa nolosheeda iyo hadba qaabka ay ay rabto inay u noolaato, markaa dhib arki ay mayso bal markay tidhaa (kaalmada adeegga bulshada) ayaan doonan miiska ayaa lugu sugi oo lashaqshaqi iyadoo lugu khasbi inay billowdo hawl aan qorshahana uguba jirin niyadna ayna uhayn. Waxaa lugu khasbaa waxbarasho iyo hawlo kale oo ayna intooda badan horumar kakeenin aadna ugu dhibaatoodaan. Waxaa lugu khasbaa oo lala simmaa haweenka dalkan udhashay oo ayagu sidii rag oo kale loo tababaray oon askari waxba kaduwanayn, meesha kuwayaga loosoo tababaray inayna ragga latartami karin kana dheeraadaan waxyaabaha ragga lugu yaqaanno. Siday iskumeel ugasoo wada bixi haweenay laga yaabo inayna waligeed ilmo dhalin hadday dhacdo inay dhashana 1,79 dhali ( waa celceliska ay haweenka dhaqmaadda kujiro ee iswiidhishka ay dhalaan) halkaas waxaa kaagasoo bixi xitaa inayna haweenka dalkan laba ilmood dhalin oo haddayba dhalaan ay ku khatimmaan 1 iyo jajab, meesha haweenkeenna ay kutartamayaan inay kala ilmo badsadaan ama ay sanad walba ilmo dhalaan. Waa arrin aad ukala fog waxa laga sugi haweenkeenna dalkan joogo iyo waxa ay awoodaan iyo sidoo kale waxa ay diyaarka uyihiin.
Soomaali haddaan nahay waxaa nalaga habaaray inaan is’urursanno isna abaabullo, ummad aan labadaas kuguulaysan horumar waa kamamnuuc. Ummad walba umadda kale intay iska urursan ogtahay oo ay iska abaabuli ogtahay way ka horumari ogtahay, sidaa caksigeeda ummad walba oon aqoon is’abaabul iyo is’urursi waxay kudhax noolaataa fashil aan billow iyo dhammaad midna lahayn oo uun iskasocdo. Waxaan sheeko kumaqlay shan boqol oo sano kahor markuu Imaam Axmed Guray halganka kujirey ciidamadiisa ugu firfircoon waxay ahaayeen Soomaali sidoo kale kuwa ugu dhibka badanna waxay ahaayeen Soomaali. Waxaa lasheegay in Imaamka oo dagaallo waawayn kumaqan markuu katago xaruntiisa uu u iman jiray iyadoo ay bililiqaysteen qolyo ciidamadiisii kamida oo markaana ay xerada ubanneeyaan. Waxaa nadabasocoto fawdo aanan ogayn goor ay billaabatay sidoo kalena goor ay dhamaani. Markii xal loo helo mucjisada noo diiday inaan is’abaabullo oon is’ururinno horumarku wuu iman inta kahorraysose waa dibusocosho iyo dadnimo xumo farta lugugu fiiqi.
AKHRI: QORAALKII 2002 ee BORLANGE iyo SOMALITALK.COM
Faafin: SomaliTalk.com | May 14, 2007